HomeGUUDXarunta Dhexe ee Yedikuyular Diyaargarowga Xilliga
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş GUUD, TURKEY, TELPHER 0
Munaasabada ciyaaraha barafka ayaa diyaarinaya xilli ciyaareedka
Duqa magaalada Güngör wuxuu cadeeyay in u diyaar garowga xilliyeedka uu kusocdo Yedikuyular Ski Center wuxuuna intaa raaciyay: yerine Waxaan dhiseynaa guryo iib ah oo cusub oo siin doona martideena adeeg hufan oo aan badali karno qaab dhismeedka caadiga ah ee cunida iyo cabitaanka ee gobolka. Goobaha cusub ayaa sidoo kale kor u qaadaya oo iibinaya alaabada maxalliga ah ee magaaladeenna. Nasiib wacan
Duqa Magaalada Kahramanmaraş Hayrettin Güngör, TRT Çukurova Reedyow Yedikuyular Ski Center ayaa hadalo ka jeedisay baahinta tooska ah. Isagoo sheegay in xarunta ay muhiimad weyn u leedahay gobolka, ayuu yidhi Güngör, “Xaruntu waxay ku taalaa qiyaastii xNUMX kiiloomitir meel u jirta bartamaha magaalada. Asxaabteena wadaniga ah iyo martida kale ee ka socota magaalada waxay gaarayaan meelaha barafka lagu ciyaaro ee masaafada u jirta 15 xarunta. Sannadkii hore, waxaan ku marti-galnay kumanaan marti-sharaf ah 10 xarunteena. Waxaan higsaneynaa inaan sii kordhinno tiradaas.
Duqa Magaalada Güngör wuxuu yiri, “Xarunta Yedikuyular Ski Center waxaa loogu qaabeeyey aag dhan 1,5 Mitir oo laba jibaaran. Wadooyin dheeri ah iyo tas-hiilaad ayaa sidoo kale lagu soo daray mashruuca. Waxaan ka shaqeynaynaa tan. Martidayada ka socota magaalooyinka deriska ah sida Gaziantep, Adiyaman, Sanliurfa, Hatay, Adana, Osmaniye iyo Mersin ayaa si weyn u muujinaya xiiseheena barafka. Waxaan u diyaarinay diyaarin muhiim ah xilli ciyaareedka cusub si aan ula kulanno xiisahaas. ”
Casuumada Dalxiiska Ski
Mayr Hayrettin Güngör, Duqa Magaalada Caasimadda, wuxuu sheegay in goobta cunnada iyo cabitaanka ee sababa wasakhowga muuqaalku ay noqon doonaan kuwa qurux badan, wuxuu yiri: Waxaan dhiseynaa dhismeyaal cusub oo martida gobolka u kuxirayaan baahidooda jawi hufan oo waxsoosaarka magaaladeena ayaa la iibin doonaa. Kooxaheenu si dhakhso leh ayey u shaqeynayaan. Waxaan rajeynayaa in shaqadeenu ay shaqeyn doonaan xilli cusub. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku casuumo walaalaheena aan walaalaha nahay iyo magaalooyinka deriska ahba Xaruntayada Skilaada Yedikuyular xilliyada cusub ”.
Xarunta Dhexe ee Yedikuyular Diyaargarowga Xilliga 20 / 09 / 2017 Degmada Kahramanmaras Metropolitan Yedikuyu kursi-qaadaa dhismaha Ski Center, sida wiishashka Xadhig ka dib markii dhamaystirka hawlaha tafatirka track beeray ee ay daqal nidaamka farsamo iyo jar sii wadaan in ay ka shaqeeyaan nidaamka. Dhammaan jidka socodka wadiiqooyinka ayaa la dhammaystiray, kaabayaashooduna way ku dhowyihiin. Xarumaha Maareynta 1844 iyo 2055, kafateeriya, xarumaha bulshada sida sii socota. In ka XAASHI 3 1840 OF TRACK NOQONAYAA meter Yedikuyular Ski Center sare tan iyo dhismaha waxaa halkan sameeyey noqon doono wiish ski inay line pole line wiish ski 8 10 musawir ah 760 mitir oo dherer ah, si wadajir ah ula saldhigga salka. Waxaa jiri doona saddex wado. Teleski wadada loogu talagalay bilowga dadka cusub ee 8 Tel
Xarunta Dhexe ee Yedikuyular Diyaargarowga Xilliga 24 / 10 / 2017 Yedikuyu in ay bilaabaan dhismaha ee degmada Kahramanmaras daraasaad Ski Center sii xawaare buuxa. Kahramanmaras Metropolitan degmada Studies iyo Mashaariicda Department of Studies iyo Mashaariicda Agaasinka dhismaha socda ee Yedikuyu gacanta Ski 1800-xnumx'l la qaatay internet fiber Joogga iyo danab dhexdhexaad transformer korontada la soo dhameeyay. dhismaha xarunta maamulka iyo maareynta ee sare 2000, makhaayadaha, snowtruck (baraf burburiyo mashiinka) vs dhismayaasha, dhismaha dhismayaasha makhaayad in sare 1844 sii jeesan. 2055 dhismaha gawaarida wadada ayaa la dhammeeyaa. Diyaarinta nidaamka geedka farsamo. Xadhigga ayaa la bilaabi doonaa ugu dhakhsaha badan. 6 kun DADKA DAILY AWOODDA Kahramanmaras degmada Metropolitan ...
Goobta Palandoken ee diyaarinta xilli ciyaareedka 19 / 11 / 2013 Palandöken miciinka ski ayaa isku diyaarinaya xilli ciyaareedka: taallaa dhexeeya jiga weyn ee turkey ee Palandöken Ski Center ayaa isku diyaarinaya xilli ciyaareedka soo socda jiilaalka barafka. Xilliga cusub, Xenadu Snow White Hotel, buurta Palandöken, waxay ku dhex martay geedaha geedaha waxayna maamushaa xadiiqada cusub ee 3 ee loogu talagalay barafka habeenkii. Xilliga xilliga barafka waxaa la furi doonaa usbuuca ugu horeeya bisha December iyada oo nidaamka barafka ee Palandöken, halkaas oo qiyaastii 4 million euro lagu maalgaliyo shaqooyinka qandhada. In ka 2011 iyo Turkey furay laba sano oo ka mid ah 'Best Sports Hotel' Xanadu Hotel Snow White ayaa sheegay in ay heleen abaalmarinta ee Maamulka Arrimaha Manager Omar Akca, "Last ...
Xerada Ergan Mountain Mountain Ski waxay diyaarineysaa xilliga 11 / 08 / 2014 Erkan Mountain Ski Resort Season dhakhso ah ay diyaarisaa Guddoomiyaha Erzincan Cabdiraxmaan Akdemir, Erkan Mountain Ski Center ee dhismaha joogtada ah ee baadhaya badan xaaladda ay ku sugan diyaarinta xilli ski xarumo dheeraad ah iyo in warbixin ka soo galku saraakiisha Erkan Mountain Ski Resort helaan. Guddoomiye Ku-xigeenka Robert Rock iyo ururada la xiriira ayaa sidoo kale ka qeyb galay saraakiisha baaritaanka ee guutooyinkiisa oo gaardis ah, meelaha loo qorsheeyey snowpark, 2. maalin ee dhismaha warshad midnimada iyo muuqaalka dhirta ku taala dib u eegis daraasaad Guddoomiyaha raxmaan Akdemir, listo dardargelinta shaqada iyo xagaaga marka la eego dhammaystirka in waa in la tixgeliyaa wanaagga, si deg deg ah dhameystirtay xilli beerashada shaqada qorshaysan ee ...
Xarunta Xarunta Dhexe ee Xarunta Dhexe ee Saab diyaarinta xilli ciyaareedka 02 / 10 / 2014 Cibiltepe Ski Center ayaa isku diyaarinaya xilli ciyaareedka: Sarikamish Cibiltepe Ski Xarunta Turkiga ee waa mid ka mid ah xarumaha dalxiiska ugu muhiimsan ee xilliga qaboobaha, xilli qaboobaha ee tareenka oo ka mid ah diyaarinta farsamo iyo geedka sii aan guraynin. kaymaha Pine u dhaxeysa dalcadaha ski dheer iyo in Cibiltepe taas oo ah mid ka mid ah xarumaha ski jecel la casri ah wiishashka ski aan qalabaysnayn, barafka on dalcadaha ka hor xilli ciyaareedkan halka nadiifinta iyo dheellitir shaqada, ayaa dhanka kale ka dhigay rakibo of wiishka kursiga afaraad socday geli jiilaalka. Guddoomiyaha Sarıkamış Muhammad hagaya, AA ku yiri hadal uu u sheegay suxufiyiinta, on dalcadaha xilli ski si ay u bixiyaan adeeg wanaagsan in kayaksever iyo sameeyey dhirta farsamo weyn cusub ...